Activities Plan » Technological University (Hmawbi)
The following associations and society are organized in the Technological University of Hmawbi.
Buddhist Association (started to organize in )
Red Cross society (started to organize in )
Blood Donation Group (started to organize in )
Sport groups are also organized in the Technological University of Hmawbi. The matches of Fusel football and chess will be held for student.
There arealot of tent books, thesis research papers and books for knowledge and pleasure in the library. Moreover, the computers connected with Internet are installed for students the relative subject easily.
(က) အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Activities များကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် စာပေဟောပြောပွဲနှင့်စျေးရောင်းပွဲတော်များ ကျင်းပခြင်း။
ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းကဦးစီးပြီး ညောင်ရေသွန်းခြင်း။
တန်ဆောင်မုန်းတွင် စုပေါင်းဘုံကထိန်ပွဲ ကျင်းပခြင်း။
(ခ) ဖွဲ့စည်းထားရှိသည့် အသင်းအဖွဲ့များစာရင်း
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မှော်ဘီ) အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအသင်းအဖွဲ့များအား ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။
(ဂ) အားကစားဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များ၊ အားကစားအမျိုးအစားနှင့်ပွဲစဉ်များကို နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မှော်ဘီ) အနေဖြင့် အားကစား အသင်းများဖွဲ့စည်း၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။ ကျောင်းသားများအား မိုးရာသီအမျိုးသားဖူဆယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ၊ စစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပပါသည်။
(ဃ) ကျောင်းစာကြည့်တိုက်ထားရှိသည့် အစီအစဉ်
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မှော်ဘီ) ရှိ ကျောင်းစာကြည်တိုက်တွင် ပြဌာန်းစာအုပ်များ၊ သုတ၊ ရသဆိုင်ရာစာအုပ်များ၊ သုတေသနနှင့်ဆိုင်ရာ စာတမ်းများကို ထားရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရှာဖွေရာ၌လွယ်ကူစေရန် e-Library ထားရှိပါသည်။
ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအား စာသင်ခန်းအတွင်း၌ ဂရုတစိုက်သင်ကြားပေးခြင်း၊ သင်ကြားပြီးသည့် သင်ခန်းစာများကို ချက်ခြင်းပြန်လည် မေးမြန်းဆွေးနွေးမှုများဖြင့် သင်ကြားခြင်း၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ အရည်အသွေးသိရှိစေရန် Tutorial များ စစ်ဆေးခြင်း၊ အချိန်မရွေး နားမလည်သော သင်ခန်းစာများအား လွတ်လပ်စွာတိုင်ပင် ဆွေးနွေးမေးမြန်းစေခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်၍ ကျူရှင်ပပျောက်စေရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။